कमाएर मात्र हैन वचत गरेर धनी बनिन्छ,यसरी गर्नुहोस वचत ! – Latest News, Video, Entertainment,Health
October 22, 2019 October 22, 2019 Info-Kantipur	0 Comments
सबै मानिसको सोच शक्तिशाली बन्ने हुन्छ । तर विभिन्न कारणले उनीहरु शक्तिमा पुग्न सक्दैनन् । शक्तिमा र्पुयाउने सबैभन्दा ठूलो र्भयाङ भनेको पैसा हो । पैसा कमाउन मात्र होइन वचत गर्न जानियो भने मात्र मानिस धनी बन्छ । सँगसँगै शक्तिशाली पनि ।
आजको स(सानो बचतले भोलि तपाईलाई ठुल्ठुला आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो कमाइबाट बचत गर्नुहोस् । तपाईं जति कमाउनुहुन्छ पहिला त्यसको हिसाब गर्नुस् र, आफ्नो आम्दानीबाट कति रुपैयाँ बचत गर्ने ? त्यो यकिन गर्नुहोस् । म यति रुपैयाँचाहीँ बचाउँछु भनेर तपाई लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईंले फजुल खर्च कटौति गर्न सक्नुहुन्छ ।
खर्च गर्नुअघि १० पटक सोच्नुहोस् कि यो मेरो आवश्यकता हो कि होइन भनेर । यदि तपाईंको आवश्यकता होइन भने खर्च गर्न्तिर नलाग्नुहोस् ।
← ‘पहिले दिल’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
छोरी लिन गएका ज्वाईसँग सासुको बिहे, जन्ती परे तिनछक्क ! →
जन्मदेखि खरानीसम्म आखिर के रहेछ त मानवयात्रा ? (हेर्नुहोस)